သက်ကြီးကိုယ်ဝန် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အသက်​၃၅နှစ်​​ကျော်​မှ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​သူ သက်​ကြီးကိုယ်​ဝန်​လို့ ​ခေါ်ပြီး အန္တရာယ်​များတဲ့ကိုယ်​ဝန်​လည်း ဖြစ်​ပါတယ်​။ အသက်​၃၅နှစ်​​ကျော်​မှ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ရတာဟာ မလွယ်​ကူလှပါဘူး။ အမျိုးသမီး​တွေဟာ အသက်​ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ဖို့ ခဲယဉ်းလာတတ်​ကြပြီး အထူးသဖြင့်​ အသက်​၃၅နှစ်​​ကျော်​လာရင်​ ပိုပိုခဲယဉ်းလာတတ်​ကြပါတယ်​။
အသက်​၃၅နှစ်​​ကျော်​လာတဲ့အခါ က​လေးရဖို့ အခွင့်​အလမ်း နည်းပါးလာတဲ့အပြင်​ ကိုယ်​ဝန်​ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်း က​လေးမှာ ​ဒေါင်း​ရောဂါစု(Down’s syndrome)နဲ့ အခြား​မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်​​တွေ ပါလာတတ်​သလို အ​မေ့မှာလည်း ​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​သွေးတိုး၊ ​သွေးဆိပ်​တက်​၊ ဆီးချိုနဲ့ အခြား​နောက်​ဆက်​တွဲ​တွေ အများကြီးဖြစ်​လာနိုင်​ပါတယ်​။
>> က​လေး​ဒေါင်း​ရောဂါစုဖြစ်​ဖုိ့ ဘယ်​​လောက်​အခွင့်​အလမ်းရှိသလဲ?
အသက်​ကြီးလာတာနဲ့အမျှ မိဘ​တွေ​ကြောက်​ကြတဲ့ ဉာဏ်​ရည်​ချို့တဲ့တဲ့ ​ဒေါင်း​​ရောဂါစု ဖြစ်​နှုန်းပိုများလာပါတယ်​။ အသက်​၂၀အရွယ်​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ ၁၀,၀၀၀ မှာ ၁​ယောက်​သာ​မွေးနိုင်​​ပေမယ့်​ အသက်​၃၅နှစ်​အရွယ်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ ၁,၀၀၀ မှာ ၃​ယောက်​​မွေးနိုင်​ပြီး အသက်​၄၀အရွယ်​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ ၁၀၀ မှာ ၃​ယောက်​​မွေးနို​င်​ပါတယ်​။
>> အသက်​၃၅နှစ်​​ကျော်​ပြီး​နောက်​ က​လေးရနိုင်​​အောင်​ ဘာ​တွေလုပ်​နိုင်​မလဲ?
အသက်​ကြီးလာ​လေ​လေ က​လေးရဖို့ အခွင့်​အလမ်းနည်း​​လေ​လေဆို​ပေမယ့်​ လုံးလုံးမဖြစ်​နိုင်​တာ​တော့မဟုတ်​ပါဘူး။ ဒီအသက်​မှာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​နိုင်​ဖို့ ပထမဆုံးမ​ကောင်းတဲ့အကျင့်​​တွေဖြစ်​တဲ့ အရက်​၊ ​ဆေးလိပ်​၊ မူးယစ်​ဆေး​တွေကို ​ရှောင်​ရှားရပါမယ်​။ ​နောက်​ ရာသီရက်​​တွေမှန်​ဖို့လည်း အ​ရေးကြီးပါတယ်​။ ရာသီမှန်​ခဲ့ရင်​ သားဥ​ကြွေမယ့်​ရက်​ကို ခန့်​မှန်းနိုင်​ပြီး အတူ​နေခြင်းဖြင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ရ​နိုင်​​ခြေများ​စေပါတယ်​။
ဒါ​တွေအပြင်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းမှန်​မှန်​လုပ်​ခြင်း၊ ကိုယ်​အ​လေးချိန်​ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သ​န္ဓေ​အောင်​​စေတဲ့ အစားအ​သောက်​​တွေစား​ပေးခြင်း စတဲ့နည်းလမ်း​တွေကလည်း က​လေးရ​စေဖို့ အ​ထောက်​အကူပြုပါတယ်​။ ​ယောဂ​ဆော့ခြင်းကလည်း ​ကောင်းပါတယ်​။ ကိုယ်​ခန္ဓာကျန်းမာ​ရေးတင်​မကပါဘူး။ စိတ်​ကျန်းမာ​ရေးကိုပါ အထူးဂရုပြုရပါမယ်​။
ဒီလိုကြိုးစား​နေပါလျက်​နဲ့ က​လေးမရနိုင်​ရင်​ အမျိုးသားရဲ့ သုတ်​ပိုးအ​ရေအတွက်​နဲ့ အခြားအချက်​​တွေကို လိုက်​ရှာသင့်​ပါတယ်​။
အသက်​ကြီးမှကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ခြင်းဟာ ​နောက်​ဆက်​တွဲဆိုးကျိုး​တွေ အင်​မတန်​များပါတယ်​။ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျနိုင်​​ခြေများသလို ​နေရာမှားသ​န္ဓေတည်​တာမျိုးလည်း ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ လမပြည့်​ဘဲက​လေး​မွေးတာမျုိးလည်း ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။ ​သွေးဆိပ်​တက်​ခြင်း၊ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ဆီးချို​ရောဂါ​တွေ၊ ​ရေမြွာရည်​နည်းခြင်းနဲ့ အချင်း​ရှေ့​ရောက်​ခြင်း​တွေလည်း ဖြစ်​နိုင်​ပါ​သေးတယ်​။
ဒါ​ကြောင့်​ အသက်​၃၅နှစ်​​ကျော်​မှ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ခဲ့ရင်​ ဆရာဝန်​ညွှန်​ကြားသမျှ လိုက်​နာပြီး ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ညီညွတ်​​အောင်​​နေ၊ ဖြစ်​တတ်​တဲ့​နောက်​ဆက်​တွဲ​တွေကို ​သေချာသတိထား​စောင့်​ကြည့်​ပါက ​ပေါင်​ပြည့်​လ​စေ့ ကျန်းမာ​တဲ့သားသားမီးမီး​လေး​တွေကို ​မွေးထုတ်နိုင်​မှာ ဧကန်​မုချပဲဖြစ်​ပါတယ်​။​
အသကျ၃၅နှဈကြျောမှ ကိုယျဝနျဆောငျသူ သကျကွီးကိုယျဝနျလို့ ချေါပွီး အန်တရာယျမြားတဲ့ကိုယျဝနျလညျး ဖွဈပါတယျ။ အသကျ၃၅နှဈကြျောမှ ကိုယျဝနျဆောငျရတာဟာ မလှယျကူလှပါဘူး။ အမြိုးသမီးတှဟော အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျဝနျဆောငျဖို့ ခဲယဉျးလာတတျကွပွီး အထူးသဖွငျ့ အသကျ၃၅နှဈကြျောလာရငျ ပိုပိုခဲယဉျးလာတတျကွပါတယျ။
အသကျ၃၅နှဈကြျောလာတဲ့အခါ ကလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျး နညျးပါးလာတဲ့အပွငျ ကိုယျဝနျရှိလာတဲ့အခါမှာလညျး ကလေးမှာ ဒေါငျးရောဂါစု(Down’s syndrome)နဲ့ အခွားမှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြတှေ ပါလာတတျသလို အမမှေ့ာလညျး ကိုယျဝနျဆောငျသှေးတိုး၊ သှေးဆိပျတကျ၊ ဆီးခြိုနဲ့ အခွားနောကျဆကျတှဲတှေ အမြားကွီးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
>> ကလေးဒေါငျးရောဂါစုဖွဈဖုိ့ ဘယျလောကျအခှငျ့အလမျးရှိသလဲ?
အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ မိဘတှကွေောကျကွတဲ့ ဉာဏျရညျခြို့တဲ့တဲ့ ဒေါငျးရောဂါစု ဖွဈနှုနျးပိုမြားလာပါတယျ။ အသကျ၂၀အရှယျကိုယျဝနျဆောငျ ၁၀,၀၀၀ မှာ ၁ယောကျသာမှေးနိုငျပမေယျ့ အသကျ၃၅နှဈအရှယျ ကိုယျဝနျဆောငျ ၁,၀၀၀ မှာ ၃ယောကျမှေးနိုငျပွီး အသကျ၄၀အရှယျကိုယျဝနျဆောငျ ၁၀၀ မှာ ၃ယောကျမှေးနိုငျပါတယျ။
>> အသကျ၃၅နှဈကြျောပွီးနောကျ ကလေးရနိုငျအောငျ ဘာတှလေုပျနိုငျမလဲ?
အသကျကွီးလာလလေေ ကလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျးနညျးလလေဆေိုပမေယျ့ လုံးလုံးမဖွဈနိုငျတာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒီအသကျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျနိုငျဖို့ ပထမဆုံးမကောငျးတဲ့အကငျြ့တှဖွေဈတဲ့ အရကျ၊ ဆေးလိပျ၊ မူးယဈဆေးတှကေို ရှောငျရှားရပါမယျ။ နောကျ ရာသီရကျတှမှေနျဖို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ရာသီမှနျခဲ့ရငျ သားဥကွှမေယျ့ရကျကို ခနျ့မှနျးနိုငျပွီး အတူနခွေငျးဖွငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျခွမြေားစပေါတယျ။
ဒါတှအေပွငျ လကေ့ငျြ့ခနျးမှနျမှနျလုပျခွငျး၊ ကိုယျအလေးခြိနျထိနျးသိမျးခွငျး၊ သန်ဓအေောငျစတေဲ့ အစားအသောကျတှစေားပေးခွငျး စတဲ့နညျးလမျးတှကေလညျး ကလေးရစဖေို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ။ ယောဂဆော့ခွငျးကလညျး ကောငျးပါတယျ။ ကိုယျခန်ဓာကနျြးမာရေးတငျမကပါဘူး။ စိတျကနျြးမာရေးကိုပါ အထူးဂရုပွုရပါမယျ။
ဒီလိုကွိုးစားနပေါလကျြနဲ့ ကလေးမရနိုငျရငျ အမြိုးသားရဲ့ သုတျပိုးအရအေတှကျနဲ့ အခွားအခကျြတှကေို လိုကျရှာသငျ့ပါတယျ။
အသကျကွီးမှကိုယျဝနျဆောငျခွငျးဟာ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှေ အငျမတနျမြားပါတယျ။ ကိုယျဝနျပကျြကနြိုငျခွမြေားသလို နရောမှားသန်ဓတေညျတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ လမပွညျ့ဘဲကလေးမှေးတာမြုိးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ သှေးဆိပျတကျခွငျး၊ ကိုယျဝနျဆောငျဆီးခြိုရောဂါတှေ၊ ရမွှောရညျနညျးခွငျးနဲ့ အခငျြးရှရေ့ောကျခွငျးတှလေညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့ အသကျ၃၅နှဈကြျောမှ ကိုယျဝနျဆောငျခဲ့ရငျ ဆရာဝနျညှနျကွားသမြှ လိုကျနာပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျအောငျနေ၊ ဖွဈတတျတဲ့နောကျဆကျတှဲတှကေို သခြောသတိထားစောငျ့ကွညျ့ပါက ပေါငျပွညျ့လစေ့ ကနျြးမာတဲ့သားသားမီးမီးလေးတှကေို မှေးထုတျနိုငျမှာ ဧကနျမုခပြဲဖွဈပါတယျ။